Eng Yariisow: Hoggaamiyihii ay u baahneed Muqdisho.!!! – Radio Muqdisho
Eng Yariisow: Hoggaamiyihii ay u baahneed Muqdisho.!!!
Hogaamiyaha dhab ah waa kan leh aragti iyo furfurnaan una dabacsan bulshadiisa, sidoo kalana fahma baahiyaha ay qabaan dadka uu hoggaamiyo, lana yimaada qorshe ku dagsan howl qabad ku aadan waqtigiisa.
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya inkastoo sanadihii ugu danbeeyay ay ka jireen isbadalo, hadana waxaa muuqatay inay maqanyihiin adeegyo badan oo lagama maarmaan u ah Bulshada Caasimadda kuwaas oo ay tabayeen dadka dagan magaalada.
Maamulka Gobalka Banaadir ee uu hoggaamiyo Eng. C/rixmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa ku guulaystay daadajinta maamulka, iyadoo inta badan degmooyinka Gobalka Banaadir laga hirgeliyay xarumo laga helo adeegyada uu bixiyo Gobalka Banaadir. talaabadaan ayaa waxaa soo dhoweeyay dad badan oo xiliyadii hore ay qasab ku ahayd inay tagaan xarunta dowladda hoose si ay u helaan adeegyada ay ka rabaan maamulka Gobalka Banaadir.
Gurmadka deg dega ah iyo in la helo xarumo gaar ah oo ay ku diyaarsanyihiin Dabdamisyo ayaa sidoo kale ahayd baahiyaha muddada dheer ay qabeen shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda, hase ahaatee latashiyo badan oo maamulka Gobalku la sameeyay Shacabkiisa ayaa waxaa u soo baxday in lagama maarmaan ay tahay in si deg deg ah looga jawaabo baahidaas.
Guddoomiyaha gobalka Banaadir Eng. C/rixmaan Cumar Cismaan “Yariisow” ayaa shalay si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta Dabdamiska iyo Gurmadka deg dega ah ee Degmada Hodan, taas oo loogu talagalay inay si deg deg ah looga jawaabo dhib kasta oo ka dhaca ilaa Afar degmo oo kala ah, Hodan, Howlwadaag, Waabari iyo Xamar-Jajab.
“Maamulka Gobalka Banaadir waxaa ka go’an inuu noqdo maamulkii u adeegayay shacabka, dhageysanayay, tana waxay ku timid ka dib markii aan dhagaysanay shacabka baahiyahooda waxaa soo baxday in shacabka baahi wayn u qabaan Dabdamiska iyo Gurmadka deg deg ah, anagana waxaan garanay in lagama maarmaan ay tahay in adeegyadaan hoos loo daadajiyo lana geeyo xarumaha dadka u dhow, sidoo kale waxaa noo qorshaysan in adeegaan laga helo dhammaan degmooyinka Gobalka.” ayuu yiri Guddoomiyaha Gobalka Banaadir.
Maamul wanaaga, isla xisaabtanka, saxida nidaamka maaliyadda, la dagaalanka musuqa, dhismaha iyo dayactirka Jidadka, ayaa sidoo kale ah tilaabooyinka muhiimka ah ee uu qaaday mudada kooban ee uu shaqaynayo maamulka Gobalka Banaadir.
Magaalada Muqdisho haatan waxaa ka jira isbadal wayn oo la taaban karo, laakiin sida dunida oo dhan leesla ogyahay, isbadal kasta oo guuleysta wuxuu ka yimaadaa Shacabka marka ay helaan hoggaan u diyaarsan howl qabad fuhan, waxaana haatan muuqata inay isla jaan qaadeen shacabka iyo hoggaanka Gobalka Banaadir.
Maxamed Kafi Sheekh Abuukar
Guddoomiye Maxamed Mursal oo maanta la caleema saarayo
WARBIXIN:-30 ilmiriqsi oo kasta geedaa laga jaraa Soomaaliya oo dhuxul looga dhigo